Liverpool iyo Chelsea oo diyaar u ah inay £ 50m ku doonayaan xiddiga Wilfried Zaha.; – Gooldhalin
Horyaallada Premier league WARARKA
Liverpool iyo Chelsea oo diyaar u ah inay £ 50m ku doonayaan xiddiga Wilfried Zaha.;
Faiza Abdikafi May 6, 2018	No Comments
Wilfried Zaha ayaa lagu soo waramayaa inuu diyaar u yahay inuu ka tago Crystal Palace islamarkaana uu rabo inuu aado kooxo waa weyn , iyadoo Liverpool, Chelsea iyo Man City ay dhamaantood raadinayaan weeraryahankan.
25 jirkaan ayaa la sheegay inuu diyaar u yahay inuu isku tijaabiyo mar kale heerkiisa ugu sareeya, isagoo ku biiri karaa Manchester United, waxaana laga yaabaa inuu ku kici karo qiima dhaan 50 milyan oo ginni.
Zaha, oo sidoo kale bartilmaameed u ah Manchester City, ayaa sheegay inuusan ku raaxeysaneynin waqtigiisa adag ee Old Trafford, madaama uu doonayo inuu xirfadiisa ciyaareed ku qaato heerka xigga ka dib xilli ciyaareed wacan oo loogu talagalay Palace.
Waxa uu yiri: “Haddii aan helayo fursad aan ugu dhaqaaqo ugu dambeyntii, taasi ma iila cabsiin doonto, wixii dhacay xilli hore.”
Sabab kale oo Zaha ah oo soo jiidasho leh oo loogu talagalay kooxaha ugu waa weyn England ayaa ah inuu sidoo kale ku xisaabtami doono inuu yahay ciyaaryahan “Premier League” iyo Uefa quotes.
Taas ayaa ah inkastoo ciyaaryahanka garabka ka ciyaara ee Ivory Coast ka dib markii Gareth Southgate uu seegay fursad uu ku badbaadin lahaa England xilli ciyaareedkii hore.
Tababaraha Liverpool Jurgen Klopp ayaa raadinaya daafaca tayada leh ee seddexda xiddig ee Mo Salah, Roberto Firmino iyo Sadio Mane, halka City ay miisaameyso inay u dhaqaaqi doonaan Zaha ama Leicester Riyad Mahrez, Chelsea ayaana u furan inay u dhaqaaqdo. ayaa shaki ka qaba mustaqbalka Eden Hazard iyo Willian.
Previous Previous post: EL- Clasico iyo 5 Dhacdo oo ay Macquul tahay inaadan ka warqabin, caawana la filan karo!
Next Next post: Conte oo sharraxay midka Adag in la ciyaaro Champions League iyo Premier League, yuu ku Sheegay kan Adag?